Ụgbọ elu South Africa ugbu a na United Airlines na Airlink
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu South Africa ugbu a na United Airlines na Airlink
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ kacha ọhụrụ na South Africa • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Codeshare a ga -eme ka ọ dịrị ndị ahịa anyị nke North America mfe iru Okavango Delta, Chobe, Kruger National Park na ụlọ ezumike egwuregwu dị n'akụkụ, Cape Town, Ogige Ugbo, Swakopmund na Copperbelt, n'etiti ndị ọzọ.
United Airlines na Airlink kwupụtara nkwekọrịta azụmahịa iji nyere ndị ahịa aka inyocha Southern Africa.
Mmekọrịta ọhụrụ na -enye ndị ahịa njem dị mfe karịa ebe 40 na Southern Africa.
Ndị ahịa United Airlines nwere ike nweta ma ọ bụ gbapụta kilomita na ụgbọ elu United na Airlink.
Taa, United Airlines na Airlink, ụgbọ elu South Africa, kwupụtara nkwekọrịta codeshare ọhụrụ nke ga -enye ndị ahịa njikọ n'etiti US na Southern Africa karịa njikọ ụgbọ elu ọ bụla ọzọ. Nkwekọrịta ọhụrụ a, nke dabere na nkwado gọọmentị, ga -enye njikọ nkwụsị site na US gaa ebe karịrị iri anọ na South Africa. Na mgbakwunye, United ga -abụ ụgbọ elu mbụ jikọtara mmemme iguzosi ike n'ihe ya na Airlink, na -enye ohere ka ndị otu MileagePlus nweta ma gbapụta ọtụtụ kilomita mgbe ha na -eme njem n'ụgbọ elu Airlink. Mmekọrịta ọhụrụ a ga -abụ na mgbakwunye na mmekọrịta dị n'etiti United na onye otu Star Alliance South African Airways.
“United gara n'ihu na -egosipụta nkwa anyị nwere n'Africa, na -amalite ụgbọ elu ọhụrụ atọ na kọntinent n'afọ a naanị gụnyere ọrụ ọhụrụ na Accra, Ghana; Lagos, Nigeria na Johannesburg, South Africa, ”Patrick Quayle, osote onye isi oche netwọkụ na njikọ aka mba ụwa kwuru United Airlines. “Ma ugbu a site na nkwekọrịta codeshare anyị na Airlink - nke bụ mmekorita kachasị na Southern Africa - ndị ahịa ga -enwe ike inyocha ọtụtụ ebe ịwụ gafee kọntinent ahụ gụnyere njikọ dị mfe na Zambia, Zimbabwe na ndị ọzọ. ”
United Airlines gara n'ihu na -agbasa ukwu ya n'ime Afrịka, na -eji ọrụ aga ebe anọ dị n'Afrịka. Na mbido ọnwa a, United kwuputara ụgbọ elu n'etiti Washington, DC na Lagos Nigeria ga -amalite na Nọvemba 29, dabere na nkwado gọọmentị. Na mbido afọ a, United bidoro ọrụ ọhụrụ n'etiti New York/Newark na Johannesburg, South Africa na n'etiti Washington, DC na Accra, Ghana, nke a na -atụ anya na ọ ga -arụ ọrụ kwa ụbọchị na Disemba na Jenụwarị. Ọrụ ama ama nke United n'etiti New York/Newark na Cape Town, South Africa ga -amalitekwa na Disemba 1.
“North America bụ ahịa dị mkpa maka ebe anyị na -aga. Codeshare a ga -eme ka ọ dịrị ndị ahịa anyị nọ na North America mfe iru Okavango Delta, Chobe, Kruger National Park na ebe egwuregwu nzuzo dị nso, Cape Town, Garden Route, Swakopmund na Copperbelt, n'etiti ndị ọzọ. Airlink Onye isi oche na onye isi njikwa, Rodger Foster. "N'otu aka ahụ, codeshare pụtara na ndị ahịa anyị nọ na mba iri na abụọ nke Afrịka anyị na -eje ozi ugbu a, ga -enweta ngwa ngwa na enweghị nsogbu na netwọkụ United niile."
A ga -etinye codeshare ọhụrụ a na nkwado gọọmentị ikpeazụ.